sttray64 EXE ဆိုတာဘာလဲ။ - အမှားများ
အဓိက > အမှားများ > Sttray64.exe လျှောက်လွှာအမှား - အဆုံးစွန်လမ်းညွှန်
Sttray64.exe လျှောက်လွှာအမှား - အဆုံးစွန်လမ်းညွှန်
sttray64 EXE ဆိုတာဘာလဲ။
STTray6464-bit Windows အတွက် SigmaTel System Tray Notification ကိုကိုယ်စားပြုသည်။ The ။exeဖိုင်အမည်ပေါ်တွင် extension ကိုတစ်ခုဖော်ပြသည်executable ဖိုင်။ executable files များသည်အချို့သောအခြေအနေများတွင်သင်၏ကွန်ပျူတာကိုထိခိုက်စေနိုင်သည်။
Konsum သည်စျေးကွက်၌အချိန်အတော်ကြာကတည်းကရှိနေသော AV ဘေးကင်းလုံခြုံရေးဝတ်စုံကိုပုံတူကူးယူထားခြင်းဖြစ်သည်။ သင့်ကွန်ပျူတာပေါ်တွင်တပ်ဆင်ထားပါက၎င်းသည်ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးတစ်ခုဖြစ်ပါကလုံခြုံရေးဖောက်သည်အတုတစ်ခုဖြစ်သည်။ သူတို့ကိုအမြတ်ထုတ်ရန်ကြိုးစားနေခြင်းကသင့်ကိုအမှန်တကယ် ၀ ယ်သည်ဖြစ်စေ၊ အရာအားလုံးအတုဖြစ်သည်၊ မမှန်ပါ။ ထို့ကြောင့်ဟုတ်ကဲ့ဟုပြောပါကသင်ဖယ်ရှားပစ်ရန်ကျွန်တော်ဖယ်ထုတ်ချင်သည်ဆိုပါက hit အနေအထားသို့သွားမည်ကိုစိုးရိမ်စရာမလိုပါ။ အရာအားလုံးကိုရွေးချယ်ပြီး၎င်းကိုသင့်စာမျက်နှာသို့ပို့ဆောင်မည့် ၀ ယ်သူ၏အပြည့်အ ၀ ဝယ်ယူခြင်းကိုရွေးချယ်ပါ။ လက်ရှိမည်သူကိုမှမသွားစေလိုသောကြောင့်အတုအယောင်လုံခြုံရေးဖောက်သည်ရှိပြီး၎င်းသည် ဗိုင်းရပ်စ်နှိမ်နင်းရေးဆော့ဖ်ဝဲလ်၏အစ်မ၊ ၎င်းသည် AVsecurity ဟင်းချို၏တိုက်ရိုက်ကိုယ်ပွားဖြစ်သည်၊ သို့သော်နောက်ကွယ်မှလူများသည်ဗိုင်းရပ်စ်နှိမ်နင်းရေးဆော့ဖ်ဝဲလ်ဖြစ်သောကြောင့်လုံခြုံရေးစနစ်အတုသည်လူအများအပြားအတွက်သင်တပ်ဆင်ထားသည့်ဗိုင်းရပ်စ်နှိမ်နင်းရေးဆော့ဝဲလ် (သို့) မည်သည့်ဆော့ဖ်ဝဲလ်ကိုမဆိုအသုံးပြုရန်ခက်ခဲစေသည်။ သင် run ချင်သောပရိုဂရမ်များသည်ဤ progra ဖြစ်သည် m သည်၎င်းကိုရပ်တန့်သွားလိမ့်မည်။ သင်၏ယခင်မန်နေဂျာကိုဖွင့်လိုက်သည်နှင့် Windows သို့ပထမ ဦး ဆုံး boot တက်လျှင်၎င်းခြိမ်းခြောက်မှုကိုဖယ်ရှားရန်အလွန်ခက်ခဲနိုင်သည်။ အလားတူဖိုင်အမည်ကိုတွေ့ရစဉ် ဒေါင်းလုပ်လုပ်ခဲ့သောအရာများသည် exhe w exe အဆုံးသတ်သွားပြီးအခြားမှာ aTS SDXC တွင်အဆုံးသတ်သွားသည်။ ကျွန်ုပ်သည် av security soup ဖြစ်သည်ဟုမှတ်ယူခဲ့သည်။ ဤခြိမ်းခြောက်မှုကိုအနည်းငယ်ကွဲပြားခြားနားစွာခေါ်ဆိုနိုင်သည်၊ သို့သော်၎င်းသည်လုပ်ငန်းစဉ်ကိုအဆုံးသတ်စရာမလိုဘဲဖိုင်တူညီသောနေရာတွင်ပင်ရှိနေသေးသည်။ ၎င်းသည် Safeload တွင်အလုပ်မလုပ်သော်လည်း၊ ကျွန်ုပ်တို့သည်ပထမဆုံးမန်နေဂျာထံပထမဆုံးဝင်ရောက်ပြီး၎င်း pro ကိုအမှန်တကယ်နှိပ်သောအခါ၎င်းဖိုင်တည်နေရာကိုကြည့်ကြစို့။ ဖိုင်တည်နေရာကိုကြည့်ကြစို့။ သင်၏ကွန်ပြူတာအသုံးပြုသူအမည် appdata အောက်တွင်ရှိနေလိမ့်မည်။ ယခုကွန်ပျူတာနှင့်အတူကွန်ပျူတာသည်၎င်းကိုမည်သို့ရပ်တန့်ရမည်ကိုဖော်ပြလိမ့်မည်။ ဆက်လက်၍ ကွန်ပျူတာကိုစတင်ပိတ်နိုင်သည်။ CDrive သို့သွားမည်။ အသုံးပြုသူလက်အောက်တွင်ရှိလိမ့်မည်။ ၎င်းသည် Vista တွင်ရှိနေသည်။ Vista ကမှာအတူတူပါပဲ nd တွင် ၀ က်ဘ်ဆိုက်တွင် XP အတွက်ဖိုင်လမ်းကြောင်းများရှိသည်၊ ထို့ကြောင့်ဤကိစ္စတွင် Jacob ဟူသော username အောက်တွင်ကျွန်ုပ်တို့သွားလိမ့်မည်။ ငါ app data အောက်မှာသွားနေတယ်။ သင့်ရဲ့ app data folder ကလျှို့ဝှက်ထားတယ်ဆိုရင်သင်ဒီမှာ inappdata ကိုသာထည့်လို့ရတယ်။ မဟုတ်ရင်သင် control panel ထဲကိုဝင်ဖို့လိုတယ်။ Enter hidden, ကျွန်ုပ်တို့အတွက် Popup အမျိုးအစားတစ်ခုတည်းသာ subfolder options များရှိသည်။ Hidden Files နှင့် Folders များကိုပြသည်။ ကျွန်ုပ်သည်လျှို့ဝှက်ဖိုင်များနှင့်ဖိုလ်ဒါများကိုပြသရန်လိုသည်။ သင်သည်လည်းကာကွယ်ထားသော Operating System Files ၏ဘေးတွင်ရှိသည့် box ကိုအမှတ်အသားပြုရန်လိုအပ်နိုင်သည်။ ငါယခုငါလုပ်နိုင်သမျှကိုဝင်ကြည့်ရှုခြင်းဖြစ်သည်။
zune update ကိုအမှား
သင်ပြန်သွားလျှင်ဤအရာကိုပယ်ဖျက်လိုပြီးကာကွယ်ထားသောဖိုင်များကိုထပ်မံဖုံးကွယ်ထားလိုလျှင်၊ လျှို့ဝှက်ဖိုင်များနှင့်ဖိုလ်ဒါများကိုမပြရန် Select ကိုနှိပ်ပါ။ အဆုံး၌၎င်းကိုသင်၏လုံခြုံရေးအတွက်သာသင်လိုချင်မှဖြစ်လိမ့်မည်။ ငါတို့အသုံးပြုသူအမည်၏အောက်တွင်ရှိနေသည်၊ app ဒေတာအောက်သို့သွားသည်၊ ဒေသတွင်းတွင်ကျွန်ုပ်တို့သွားသည်။ ဤတွင်သင့်တွင်ဖိုင်တစ်ခုရှိလိမ့်မည်။ လူတိုင်းအတွက်မတူညီသောသူဟုခေါ်ကြလိမ့်မည်။ vmq ooo မှစပြီးလူတိုင်းကွဲပြားလိမ့်မည်။ ဒီနေရာမှာပထမဆုံးတစ်ခုရှိတယ်။ ဒါကဒီချည်ရဲ့နောက်ဆုံးပြန်လည်သုံးသပ်မှုပဲ။ ဒါကြောင့်ဒီဖိုလ်ဒါမှာဘာမှမရှိဘူး၊ ဒီတစ်ခါတော့ငါဖယ်လိုက်မယ်။ ဒါပေမယ့်ဒီတစ်ကြိမ်မှာတော့ vx ကတစ်ခုခုဖြစ်လိမ့်မယ်။ တကယ်လို့များအားလုံးကြည့်လိုက်တဲ့အခါ Apple Computer cyberlink eleva ted diagnostics HP ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့တကယ်ကိုထူးဆန်းနေတယ်။ ဒါပေမယ့်ဒါကအဓိပ္ပာယ်မရှိဘူး၊ ဒါကြောင့်သင်ဖွင့်ချင်တဲ့သူနဲ့အခြားဖိုလ်ဒါတစ်ခုရှိရင် ဒီအိုင်ကွန်ပါ ၀ င်တဲ့ဒါမှမဟုတ် shwd wand မှာအဆုံးသတ်သွားမယ် ၎င်းသည်သင်ညာဘက်ကိုနှိပ်ပြီးဖျက်ပစ်လျှင်၎င်းသည် tostop ကိုခြိမ်းခြောက်ခြင်းဖြစ်ပြီး၎င်းသည်အလုပ်မလုပ်လျှင်၎င်းကိုသင်ဖျက်ပစ်လိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ ၎င်းကိုသင်မပြီးမြောက်နိုင်ပါ။ အကယ်၍ သင်သာတတ်နိုင်လျှင်အလုပ်ကိုအဆုံးသတ်နိုင်သည်မှာ Task Manager တွင်အဆုံးသတ်ရန်ဖြစ်သည်။ ခြိမ်းခြောက်မှုပျောက်ကွယ်သွားလိမ့်မည်။ ထို့နောက်သင်ကညာဘက်ကိုနှိပ်ပြီးဖျက်ပစ်နိုင်သည်။
မဟုတ်ရင် Rename ကိုညာဖက်နှိပ်ပြီးသင်လိုချင်တာကိုရိုက်ထည့်ပြီးကွန်ပျူတာကိုပိတ်ပြီးထပ်ဖွင့်နိုင်သည်။ ၎င်းကိုသင်ဖျက်ပစ်နိုင်သင့်တယ်။ အဲဒါတစ်ခုမှတစ်ခုမှမလုပ်နိုင်လျှင်သင့်ကိုအကြံပေးလိုပါသည်။ လုံခြုံစိတ်ချရသော mode သို့တက်ပါ။ သင်၏ username appdatalocal သို့သွားသောလမ်းကြောင်းသို့သွားပါ။ ထို့နောက် thatgobbledygook ဖိုင်တွဲသည်သင့်အတွက်ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့အတွက်အက္ခရာကိုးလုံးရှည်လျားသောပုံပေါ်သည်ကျွန်ုပ်တို့စာလုံးရှစ်လုံးကိုလည်းတွေ့မြင်ပြီးဖြစ်သည်။ ကွန်ပျူတာကိုပြန်ဖွင့်ပါ၊ အခြားသူတစ် ဦး ဦး ၏ကြိုးမျှင်လည်းသင့်အတွက်ဖြစ်နိုင်သည်၊ သင်တစ်နည်းနည်းနဲ့ချည်နှောင်နိုင်အောင်သင်လုပ်နိုင်သည်ကိုသင်ဖျက်ပစ်နိုင်သည်၊ ၎င်းကိုသင်ဖျက်နိုင်သည်။ သင် ထပ်မံ၍ အမည်ပြောင်းနိုင်သည်၊ ကွန်ပျူတာကိုပြန်ဖွင့်ပါ၊ လုံခြုံရေးဖောက်သည်များကို download လုပ်ပါ။ ၎င်းသည်သင်၏ဘရောက်ဇာကိုမကြာခဏပိတ်လိမ့်မည်။ ၎င်းသည်အခြေခံအားဖြင့်၎င်းသည်ဆက်သွယ်မှု diagnoseinternet ဟုဆိုသောအရာနှင့်တူသည်ကိုသင်တွေ့လိမ့်မည်။ ဤအရာသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ဗိုင်းရပ်စ်သို့မဟုတ်ဝက်ဘ်ဆိုက်ရှိအင်တာနက်စူးစမ်းရှာဖွေသူဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့လက်စွဲလမ်းညွှန်ကိုဖယ်ရှားရန်ရည်ညွှန်းသည်။ အောက်မှာဒီလိုလုပ်ဖို့ဘယ်လိုညွှန်ကြားချက်တွေရှိသလဲဒါမှမဟုတ် Iggyusers ကိုကျွန်တော်သွားတဲ့ Firefox အသုံးပြုသူတွေအတွက် proxy ကိုဘယ်လို reset လုပ်ရမယ်ဆိုတဲ့ညွှန်ကြားချက်တွေလည်းရှိပါတယ်။ ဒါကြောင့် Tools ကိုသွားပါတယ်။ အောက်ပါအင်တာနက်ရွေးစရာများကိုအင်တာနက်ရွေးစရာများအောက်တွင်ကျွန်ုပ်ရွေးထားပါသည်။ lan setti ngs အခြေခံအားဖြင့်ကျွန်ုပ်သည် proxy box များကို uncheck လုပ်လိမ့်မည်။ အကယ်၍ ကျွန်ုပ်အမှန်တကယ် update လုပ်လျှင်၎င်း proxy box ကို uncheck လုပ်လိုက်ပြီဖြစ်သည်။ , အွန်လိုင်းကွန်ပျူတာပြုပြင် org သို့တိုတောင်းတဲ့နှုတ်ခွန်းဆက်ချင်ပါတယ်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ဝက်ဘ်ဆိုက်မှတစ်ဆင့်လည်းအွန်လိုင်းကွန်ပြူတာပြုပြင်ခြင်းသံသယများ၊ သို့မဟုတ်သင်ဖယ်ရှားရေးကိုကိုင်တွယ်ရန်အလွန်ခက်ခဲလွန်းသည်၊ အကူအညီသို့မဟုတ်ကျွမ်းကျင်သူလိုအပ်နေသေးသည်ကိုလည်းသင်အွန်လိုင်းကွန်ရက်မှတစ်ဆင့်ဆက်သွယ်နိုင်သည်။ အွန်လိုင်းကွန်ပြူတာပြုပြင်ရေးဌာနကိုသင်သွားနိုင်သည်။ သူတို့ကသင့်အတွက်ဒီဗိုင်းရပ်စ်ပိုးကိုဖယ်ရှားလိမ့်မယ်။ ဒီဟာဒေါ်လာ ၈၉ ကျသင့်တယ်။
၎င်းသည်အခြေခံအားဖြင့်ဝေးလံခေါင်ဖျားသောပြန်လည်ပြုပြင်သည့်ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်၎င်းတို့အားသင့်ထံသို့ချက်ချင်းလာရောက်ပေးသောကြောင့်၎င်းတို့ကိုကျွန်ုပ်တို့ရပ်တန့်စေလိုသည်၊ ဤချည်မျှင်သည်ယခုကျွန်ုပ်တို့လုပ်ဆောင်နေသည့်အရာကဲ့သို့ပင်လျင်မြန်စွာသာ registry ကိုသွားရန်ဖြစ်သည်။ startup မှာပါသဲလွန်စတွေကိုဖယ်ရှားပြီးသေချာအောင်လုပ်ပါ။ ဒါ့အပြင် Spiro Doctor နဲ့ဗိုင်းရပ်စ်နှိမ်နင်းရေးစကင်ဖတ်စစ်ဆေးမှုကိုအပြည့်အ ၀ မသွားသင့်ဘူး။ ဗိုင်းရပ်စ်နှိမ်နင်းရေးဆော့ဖ်ဝဲလ်သည်ကျွန်ုပ်တို့၏အကြိုက်ဆုံး ၀ န်ဆောင်မှုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်သင်၏ကွန်ပျူတာကိုကာကွယ်ပေးလိမ့်မည်။ ထို့ကြောင့်သင်ထပ်မံကူးစက်ခံရမည်မဟုတ်ပါ။ အကယ်၍ သင်အဆင်ပြေသောဗိုင်းရပ်စ်နှိမ်နင်းရေးဆော့ဝဲလ်ကို ၀ ယ်ရန်မရည်ရွယ်ပါကအနည်းဆုံးကျွန်ုပ်တို့၏အကြံပြုထားသောဆော့ဝဲလ်ကို အသုံးပြု၍ အပြည့်အဝစကင်ဖတ်စစ်ဆေးပါ။
သင်ဤလမ်းညွှန်ကိုငှားယူနိုင်သော်လည်း၎င်းကိုစကင်ဖတ်စစ်ဆေးရန်အလွန်အရေးကြီးသည်၊ သို့သော်၎င်းကိုသင်မ run လျှင်သင်မည်သည့်လမ်းကြောင်းကိုမဆိုဖျက်သိမ်းပြီးကြောင်းသင်မသိရှိဘဲကျွန်ုပ်တို့၏ဝက်ဘ်ဆိုက်တွင်သင်ရှာနိုင်သည်။ သင်ဒုတိယဗိုင်းရပ်စ်ကိုအသုံးပြုနေသည်လားသို့မဟုတ်သင်၌အခြားသိုမဟုတ် Trojan တိမ်ထဲရှိမရှိသိပါ။ သင်၏စကားဝှက်များကိုရယူရန် keylogger ကိုသင်ထည့်သွင်းနေကြောင်းသူတို့သိကြသည်။ ဒါကြောင့်သင်ဟာဘာမှမကူးစက်နိုင်အောင်သေချာအောင်ဒီ scan ကို run ရန်အလွန်အရေးကြီးတယ်။ ငါလည်း Malwarebytes နဲ့စကင်ဖတ်စစ်ဆေးဖို့ soSpiro dr ကိုလည်း run သည်။
ငါမြင်ဖူးသမျှအရာများ၊ ၎င်းသည်ဘာလဲဘာလဲ၊ Malwarebytes နှင့်အတူဤ Spire Doctor နှင့်ဗိုင်းရပ်စ်နှိမ်နင်းရေးစကင်ဖတ်စစ်ဆေးမှုကိုကျွန်ုပ်ဖောက်သည်အဖြစ်ဖောက်သည်အဖြစ်အကြံပြုသည်။ ၎င်းကိုဒေါင်းလုပ်လုပ်ရန်ကျွန်ုပ်အထူးအကြံပြုလိုသည်။ အရာအားလုံးကိုဖယ်ရှားရန်ဖောက်သည်တစ် ဦး ကို ၀ ယ်ပါ၊ သို့သော်၎င်းနှင့် ပတ်သက်၍ တကယ်ကောင်းသည့်အရာမှာ၎င်းသည်သင့် system ပေါ်တွင်သင်ဖျက်ရန်လိုအပ်သည့်ဖိုင်များအတွက်ဖိုင်အတိအကျကိုပြသခြင်းဖြစ်သည်။ ဤတွင်ကျွန်ုပ်တို့ကြည့်ပါကကျွန်ုပ်တို့မှတ်ပုံတင်ခြင်းအချို့ရှိသည်။ ငါသွားမယ်အခု registry key တွေဘယ်လိုဝင်ငွေရမယ်ဆိုတာကိုပြမယ်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဗိုင်းရပ်စ်ဖယ်ရှားရေးဝက်ဘ်ဆိုက်မသက်ဆိုင်ကြောင်းရှင်းလင်းချက်ကိုဖတ်ရှုဖို့သတိရပါ။ မည်သူတစ် ဦး တစ်ယောက်ကို registry ထဲမဝင်နှင့်၎င်းကိုလုပ်ရန်ကျွန်ုပ်တို့အကြံပြုသည်မဟုတ်ပါ၊ သို့သော်သင်ကြားရေးရည်ရွယ်ချက်အရ reg edit ကိုရိုက်ထည့်ရန် registry ကိုရိုက်ထည့်ပါမည်။
ယခုပထမ ဦး ဆုံးသဲလွန်စကိုယခု hki အသုံးပြုသူလက်အောက်တွင်ရှိနေသည်။ ကျွန်ုပ်သည်အမြဲတစေ backup တစ်ခုကိုဖန်တီးရန်အထူးအကြံပြုလိုသည်။ သင်လက်ရှိ directory ကို နှိပ်၍ တင်ပို့နိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်သိသော registry ကောင်းသောနေရာတွင်သိမ်းဆည်းရန်လွယ်ကူသည်မလွယ်ကူပါ။ ၎င်းသည်တော်တော်အန္တရာယ်ရှိနိုင်သည်။ ယခုငါ abss ကိုသွား။ ဒီမှာကဒီမှာအားလုံးဖျက်ပစ်နိုင်ပါတယ်အားလုံး junk ဒါကိုယ့်ကိုယ့်ကိုကိုယ်ဖျက်ပစ်ဒီဖိုင်တွဲကိုဖျက်ပစ် yeah perfectlyုံ ok သောဤသဲလွန်စအားလုံးအခြေခံအားဖြင့်ဤနေရာတွင်၌ဖြစ်ကြပြီးကျနော်တို့ရှေ့ဆက်သွားနှင့်ဤသူအပေါင်းတို့ကိုဖယ်ရှားနိုင် ၊ ယခုတွင် registry key များကိုပြုပြင်ပြီးပြီ။ ကံမကောင်းစွာဖြင့်သင်မည်သည့် registry keys များကိုပြင်ဆင်ရန်လိုအပ်သည်၊ သင်ပြုပြင်ရန်မလိုအပ်သည်မှာ၎င်းသည် system တစ်ခုလုံးကိုအကျိုးသက်ရောက်သည်မဟုတ်သောကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့မပြောနိုင်ပါ။ လုံခြုံစိတ်ချရသော ၀ န်ဆောင်မှုကိုအသုံးပြုသင့်သည်၊ ပြင်ဆင်သင့်သည်၊ သင်၌ရှိသည့်အရာအားလုံးကိုအသုံးပြုနိုင်သည်။ သင်၌ဘာမျှမပါရှိပါကကျွန်ုပ်သည်ခြိမ်းခြောက်မှုကာကွယ်မှုဝတ်စုံကိုကျွန်ုပ်တို့အထူးပူဇော်ထားသော Spiro Doctor နှင့်ဗိုင်းရပ်စ်နှိမ်နင်းရေးဆပ်ပြာဆရာဝန်အားအထူးအကြံပြုလိုပါသည်။ သင်ဆက်လုပ်နိုင်သည်။ Securitytube ကိုဗိုင်းရပ်စ်ဖယ်ရှားရေး ၀ က်ဘ်ဆိုက်ပေါ်တွင်မှန်ကန်သောညွှန်ကြားချက်များအရထည့်သွင်းထားသည်။ ငါတို့ကကူညီဖို့ဒီကိုရောက်နေတယ်
အဘယ်ကြောင့် Sstray ပျက်ကျ exe သနည်း?
Windows ကသင့်ကိုအကြောင်းကြားမယ်ဆိုရင်ရက်စက်သည်။exeအမှားအယွင်းများ, အကြောင်းရင်းပျက်စီးသို့မဟုတ်အကျင့်ပျက် registry ကို entries တွေကို၏ရလဒ်ဖြစ်နိုင်သည်။ များသောအားဖြင့်၎င်းသည် Windows registry ကိုစစ်ဆေးရန်ကူညီသည်ရက်စက်သည်။exeအမှားများ!
HDD ပြင်ဆင်ချက်သည်ဒါဇင်နှင့်ချီသောအခြားဖောက်သည်များ၏ပုံတူဖြစ်သည်။ ထိုတွင်ရှိသောသူတို့တွင်များသောအားဖြင့်သူတို့၏နာမည်တွင် HDD ပါ ၀ င်သော်လည်းကျွန်ုပ်သည် Defragmenter ကဲ့သို့သောအရာဟုမခေါ်ခဲ့ပါ၊ ယခုတွင်၎င်းသည်မမှန်ကန်ပါ။ သို့မဟုတ်မဟုတ်ရင်လူဆိုးစာရင်းလျှောက်လွှာအဖြစ်လူသိများ။
၎င်းသည်သင်၏ကွန်ပျူတာကိုအမှန်တကယ်ကူညီရန်ရည်ရွယ်ထားသော်လည်း၎င်းသည်မှားယွင်းနေသည်။ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တွင်ရှိသည့် RAM ပမာဏ၊ တူညီသောနည်းဖြင့်တပ်ဆင်ထားသော drives ပမာဏကဲ့သို့သောကွန်ပျူတာပေါ်တွင်အမှန်တကယ်တိကျသောသတင်းအချက်အလက်များစွာကိုပြသသည်။ ငါနေရာမရှိတော့ဟုဆိုသည်အပါအဝင်မှားယွင်းသောနှင့်အထင်မြင်မှားစေသောသတင်းအချက်အလက်ကိုပြသအစီအစဉ်။ ငါမြင်ရပြီ။ ကျွန်ုပ်သည်မြင်ကွင်းကိုရရှိသည်။ ၎င်းသည်အလွန်အရေးကြီးသော hard drive တစ်ခုသာဖြစ်ပြီး၊ အမှားမတွေ့ပါ၊ hard drive ပျောက်နေသည်။ သင်ဤအမှားများတစ်ဒါဇင်ကိုဖြစ်ပေါ်နေသည်။ ၎င်းကို Windows Vista XP ရှိ Windows7ကွန်ပျူတာပေါ်တွင်ပြုလုပ်နေသည်မှာအတူတူပင်ဖြစ်လိမ့်မည်။ အနည်းငယ်ကွဲပြားလိမ့်မည်။ ဖိုင်လမ်းကြောင်းများသာကွဲပြားလိမ့်မည်။ ဗိုင်းရပ်စ်သို့မဟုတ်ဝက်ဘ်ဆိုက်ရှိထိုဖိုင်လမ်းကြောင်းများကိုကျွန်ုပ်တို့ဖယ်ရှားလိမ့်မည်။ ၎င်းတို့ကိုသင့်လျော်သောညွှန်ကြားချက်များအောက်တွင်ဖော်ပြထားသော HED-Fix လမ်းညွှန်သို့သွားပြီးသင်လိုအပ်သောအချက်အလက်အားလုံးကိုသင်ရရှိမည်ဖြစ်သည်။
ဒီတော့ဖယ်ရှားရေးလုပ်ထုံးလုပ်နည်းအပေါ်ကိုရွှေ့ကြကုန်အံ့။ သင်သတိမပြုမိခြင်းသို့မဟုတ်သတိမပြုမိခြင်း၏ပထမ ဦး ဆုံးအချက်တစ်ခုမှာ Task Manager ကိုပိတ်ထားပြီးသင် Windows7နှင့် Vista အတွက် Ctrl key Shift Escape ကိုကိုင်ထားပါက Task Manager နှင့်မည်သည့်လုပ်ငန်းစဉ်ကိုသင်မြင်နိုင်မည်မဟုတ်ပါ။ ဒီပရိုဂရမ်ကို run နေတယ်၊ ​​၁၀ မိနစ်ခန့်အကြာမှာ၊ သင့်ကွန်ပျူတာပြန်ဖွင့်ကောင်းမဖြစ်ကောင်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်လိမ့်မယ် (သို့) ၁၀ မိနစ်အကြာမှာအမှားအယွင်းတွေအများအပြားရှိနေတယ်ဆိုတာကိုသတိပြုပါစေ၊ ဤနေရာတွင်၎င်း၏ hdd ပြင်ဆင်ချက်ကိုမီးမောင်းထိုးပြပါ။ ယခုလူအများစုသည်မည်သည့် ၀ န်ဆောင်မှုခံယူသူ၏ desktop ပေါ်တွင်အိုင်ကွန်ကိုတွေ့ရလိမ့်မည်။ ယေဘူယျအားဖြင့်ဤကဲ့သို့သောဖြစ်လိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ သို့မဟုတ်ပါကအောက်ခြေနှုတ်ခမ်းပေါ်ရှိ startup သို့သွားပါကသင်လုပ်နိုင်သည်။ သင်မြင်တွေ့ရမည့် disk space ကိုပြင်ပါ။ လူအများစုကထိုနေရာတွင်စာရင်းသွင်းပြီးပြီဆိုလျှင်သင်လုပ်နိုင်သည်မှာ r ဖြစ်သည် Desktop ပေါ်တွင်သို့မဟုတ်ဤတွင်သင် file ကို right click နှိပ်၍ Properties ကိုရွေးနိုင်သည်။ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်လုပ်သည်။ ၎င်းသည် executable ကိုအမှန်တကယ်စာရင်းပြုစုသည်။ ဤသည်မှာနာမည်ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ HS ဖြစ်သည်။ သင်၏ကွန်ပျူတာနှင့်ထူးခြားလိမ့်မည်။ များသောအားဖြင့်စာမေးပွဲသည်စာလုံးရှစ်လုံးမှ ၁၄ လုံးအကြားရှိသည်။ ကျွန်ုပ်ပြောနိုင်သည်မှာတခါတရံဤကိစ္စ၏အခြားတည်နေရာတစ်ခုတွင်ဖြစ်သည်။ ပရိုဂရမ်ဒေတာထဲမှာငါကအခြားဘယ်နေရာမှာမဆိုထက် In-program ကိုဒေတာကိုတွေ့မြင်ပေမယ့်ငါသည်လည်းအခြားဖိုင်တွဲများတွင်သတိထားမိ, ဒါကြောင့်ဖြစ်သနည်း ငါဒီတည်နေရာသို့မဟုတ် ctrl ci ကိုသာကူးယူနိုင်, ငါပြောနိုင်, ကူးယူ, ပြတင်းပေါက် start button ကိုနှိပ်ပါငါရှေ့ဆက်သွားနှင့်ကွန်ပျူတာကိုသွားနှင့်ဒီမှာကွန်ပျူတာပေါ်တွင်ငါသွားဒီလမ်းကြောင်းကို paste တခါဂရုစိုက်ပါနိုင်ထင်ပါတယ် အကယ်၍ ကျွန်ုပ်အမှန်တကယ်ဆင်းသွားလျှင်၎င်းဖိုင်ကိုကျွန်ုပ်တို့တွေ့လိမ့်မည်။ ထိုအချိန်တွင်သင်ကလစ် နှိပ်၍ သို့မဟုတ်၎င်းသည်ဘာလဲဆိုတာကိုညာဘက် နှိပ်၍ ကြည့်နိုင်သည်။ ၎င်းကိုစစ်ဆေးကြည့်ပါ။ တကယ်တော့ဒီကိစ္စဟာကျွန်တော်ကွန်ပျူတာထဲမှာနောက်ဆုံး install လုပ်ကတည်းကစိတ်ဖိစီးနေတုန်းပါပဲ။ ဒါကြောင့် desktop ပေါ်မှာရှိတဲ့ကျွန်တော်ကိုသွားကြည့်ပါ၊ ၎င်းကို right-click နှိပ်ပြီး Properties ကိုနှိပ်ပါ။ X WN ဆိုတာသင်ပါပဲ။ ဒီဟာကဘယ်လိုဆင်တူသလဲဆိုတာဒီမှာတွေ့လိမ့်မယ်။ gibberish ဆိုတာနဲ့ဖိနပ်စီးတာကိုပြသတာပေါ့။ ဒါကြောင့်ကျနော်တို့ client ကိုတကယ် install လုပ်တဲ့အချိန်ကကွဲပြားတာပေါ့။ ဒီမှာတစ်ခုဖြစ်တယ်။ ဒါကနောက်တစ်ခုနောက်တစ်ခုပေါ့။ do သည်အမည်ပြောင်းရုံသာဖြစ်သည်။ တကယ့်အလွန်ထူးဆန်းသောလှပသောနာမည်ဖြင့်တစ်ချိန်ကအမည်ပြောင်းပါ။ သင်အမည်ပြောင်းရန်ကိုနှိပ်ပါကယနေ့တတိယမြောက်ဖြစ်ပြီး ၂၀၁၁ ခုနှစ်တွင်သင်သိသောကြောင့်၎င်းမှာရှိသည်။ ၂၀၁၁ ၏တတိယမြောက်နေရာတွင်သင်တစ်ချိန်ချိန်တွင်ဖယ်ရှားလိုသောအရာများဖြစ်သည်။
ငါလုပ်နိုင်တာကသင့်ကွန်ပျူတာကိုအမှန်တကယ်ပြန်စနိုင်ပြီးလမ်းကြောင်းလမ်းကြောင်းအတိုင်းပြန်သွားပြီးဖိုင်ကိုယခုဖျက်ပစ်လိုက်ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ တကယ်လို့များငါတို့အတွက်အဲဒါကိုတကယ်ဖျက်ပစ်လိုက်ရင်ဘာလို့လဲဆိုတော့ငါမဖျက်နိုင်လို့ပါ။ ၎င်းသည်လက်ရှိအသုံးပြုနေပြီး၎င်းသည်ဖိုင်များအသုံးပြုနေစဉ်၎င်းကိုမဖျက်နိုင်သည့်အခါ၊ ဤပရိုဂရမ်သည် Home ကိုအသုံးပြုရန်အန္တရာယ်ကင်းသောကြောင့်၎င်းကိုလုပ်ဆောင်ရန်နောက်ထပ်အရာတစ်ခုလည်းရှိပါကသင်သည်လုံခြုံစိတ်ချရသောစနစ်သို့လည်း ဝင်ရောက်၍ ဖယ်ရှားပစ်နိုင်သည်။ ဒါကိုကျွန်တော်တို့ပြတော့မယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒါကနည်းနည်းသက်သာတဲ့အတွက်ကြောင့်တကယ်တော့အဲဒါက registry ထဲမှာရှိတယ်။ Windows start ခလုတ်ကိုနှိပ်ပြီး reg edit ကိုရိုက်ပါ။ ကျွန်ုပ်ကိုယ်တိုင်မှတ်ပုံတင်ခြင်းသို့မသွားရန်အကြံပြုပါသည်။ ပုံမှန်အားဖြင့်ကျွန်ုပ်သည် software ကိုအကြံပြုပါသည်။ သို့သော် testmanager ကိုပိတ်ထားပြီး၎င်းကိုဖွင့်ရန်လိုအပ်ပါသည်။ ကျွန်တော့် screen ထိပ်ဆုံးမှာလုပ်ပါ။ ဒါကြောင့် local software အောက်မှာ microsoftwindows အောက်မှာသွားတဲ့ system sub system ကဒီနေရာကိုသွားပြီး၊ ဒါကိုနှစ်ချက်နှိပ်လိုက်ရင် task manager ကိုပိတ်လိုက်ပါလိမ့်မယ်။ ဒါကိုနှစ်ချက်နှိပ်လိုက်ရင်ဒီမှာတန်ဖိုး ၁ တန်ဖိုးဟာမကောင်းဘူးလို့ဆိုတယ်။ ၊ ဒါကိုအမှန်တကယ်ပိတ်ပစ်လိုက်တယ်။ ကျွန်တော်တို့သုညတန်ဖိုးကိုလိုချင်တယ်။ ပြီးရင်အဆင်ပြေသွားမှာပါ။ ဒါကနောက်ထပ်အလုပ်မလုပ်သင့်ဘူး။
ယခုဗိုင်းရပ်စ်နှိမ်နင်းရေးဆော့ဖ်ဝဲလ်တိုင်းသည်၎င်းကိုအလိုအလျောက်ဖျက်သိမ်းနိုင်သင့်သည်။ ထို့ကြောင့်လူအများစုကိုကျွန်ုပ်အထူးအကြံပြုလိုပါသည်။ Spyro Doctor နှင့်အတူ Antivirus သည်၎င်းခြိမ်းခြောက်မှုကိုဖြေရှင်းရန်အလုပ်လုပ်သည်ကိုသိရှိပြီဖြစ်သည်။ စကင်နာ, ဒါကြောင့်ပထမ ဦး ဆုံးအကြိမ်မတက်လျှင်, ပရိုဂရမ်ကိုထပ်မံ update နှင့်အခြားစကင်လုပ်ပါရုံတိုတောင်းသောအစားတစ် ဦး အပြည့်အဝစကင်ဖတ်စစ်ဆေးမှုကို run ရုံအခြားစကင်ဖတ်စစ်ဆေးမှု update ကိုပြုရုံ, ဤအသစ်သောယခုပုံမှန်အားဖြင့်အလုပ်လုပ်တယ် ။ ငါ Ctrl-Shift-Xscape ကိုကိုင်ထားမည်။ hg localmac Hine မှလက်ရှိ HT အသုံးပြုသူလုပ်သည် မှလွဲ၍ တူညီသောလမ်းကြောင်းအတိုင်းသွားရန် HT currentuser အောက်သို့သွားရန်လိုလိမ့်မည်။ ငါလုပ်ခဲ့သည့်အတိုင်းသင်ယခုပြုလုပ်နိုင်သည်။ သင်သည်ဤတန်ဖိုးကိုပြောင်းလဲပြီးသည်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ Ctrl-Shift key မတိုင်မီ xscape လုပ်၍ Task Manager ကိုယူလာမည်ဆိုပါက Test Manager ရှိမည်။ တကယ်တော့ဒီပရိုဂရမ်တော်တော်များများမှာအလုပ်လုပ်နေတယ်။ အပေါ်ကစကင်နာဟာ sd point h GD ရှိတယ်။ ငါကြည့်လိုက်ရင်ဒီမှာဒီမှာ unitcorp ကိုလောင်းဖို့အဆင်သင့်ပဲ။ system tray ထဲကတစ်ခုက X ရှိတယ်။ တစ်လမ်းက windows လုံခြုံရေးတစ်ခုသတိပေးတယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့အနီရောင် X 1 ကဘာလဲ၊ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒါက Sp လိုပဲ။ ရှေ့ကိုဆက်သွားရအောင်။ ဒီလုပ်ငန်းစဉ်ကိုပြီးအောင်လုပ်မယ်။ ဒါကြောင့်အခုကျွန်တော်တို့အခုအလုပ်လုပ်နေပြီဆိုတော့သင်ပြန်လည်စတင်ပြီလားမေးဖို့လိုတယ် အကယ်၍ သင်က track နှစ်ခုလုံးကိုပြန်ပြီးအမည်ပေးပြီးပြီဆိုလျှင်ကျွန်ုပ်ကိုဖတ်ပါကသင်၏ကွန်ပျူတာကို ed လုပ်ပါလိမ့်မည်။ processlet ၌ဤအရာသည်ကျွန်ုပ်ဤတွင်ပြန်ပြောင်းသွားပြီးယခုငါပြောခဲ့သည့်အတိုင်းအမည်ပြောင်းထားသောဖိုင်များကိုဖျက်ပစ်လိမ့်မည်။ သင့်ကွန်ပျူတာကိုသာပြန်လည်စတင်နိုင်သည်၊ သို့သော်ကျွန်ုပ်သည်ယခုဖိုင်တစ်ခု၏လမ်းကြောင်းကိုရှာဖွေရန်၊ ကျွန်ုပ်သည်အခြားအရာတစ်ခုခုကိုလုပ်နိုင်ပြီဖြစ်သောကြောင့်ဖယ်ရှားထားသောဖိုင်နှစ်ခုလုံးကိုနာမည်ပြောင်းဖို့သေချာသည်၊ အမှန်တကယ် MS ပြင်ဆင်မှုအောက်တွင်သွားပြီးကျွန်ုပ်၏စတင်မှုလုပ်ငန်းစဉ်များကိုကြည့်ပါ၊ ကျွန်ုပ်စတင်နိုင်သည်။ ၎င်းကို ms configstartup သို့ရိုက်ထည့်ပါ။ ကျွန်ုပ်ဒီမှာအနီးကပ်ကြည့်မည်ဆိုလျှင်မသိသောထုတ်လုပ်သူကျွန်ုပ်သည်အကြိမ်များစွာတပ်ဆင်ထားသည့်ထူးဆန်းစွာအမည်ပေးထားသောဖိုင်များအားလုံးကိုသင်မြင်ရလိမ့်မည်။ ၎င်းတို့ထဲမှတစ်ခုသည်အမှန်တကယ် Fit client အတွက်ဖြစ်လိမ့်မည်။ system tray ကိုကျွန်ုပ်ကြည့်လိုက်သောအခါ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်ဖိုင်အားဖျက်ပစ်ပြီးပြီဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်သည်ဤဖိုင်ကိုဖျက်လိုက်သည်။ သို့သော်ဤဖိုင်သည်အီးပရိုဂရမ်ဒေတာအဘယ်မှာရှိသနည်းကိုရှာဖွေရန်အခြားနည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဖယ်ရှားပြီးဖြစ်သည်
စီဒီ drive ကိုလှည့်လည်ကြည့်ရှုနေစဉ်သင်မြင်နိုင်မည်မဟုတ်ပါ။ ၎င်းကိုစာလုံးကြီးများဖြင့်ရိုက်ပါ၊ ပြီးလျှင်ပရိုဂရမ်ဒေတာများကိုလျှို့ဝှက်ဖိုင်တစ်ခုဖြစ်ပြီးဖိုင်များကိုမည်သို့ဝှက်မည်ကိုသာပြပါ။ control panel ကပဲကျွန်တော်တို့သွားတာနဲ့ Hidden files တွေနဲ့ folders တွေထဲကိုထည့်လိုက်ရုံနဲ့ HitApply ကအဆင်ပြေသွားပြီ။ ဒါဆိုရင် program data folder ကိုမြင်ရလိမ့်မယ်။ program data folder ကလျှို့ဝှက် program data folder တစ်ခုဖြစ်လို့ငါပြောခဲ့သလိုပဲ၊ ငါနောက်ကျောထိုင်နှင့်အနားယူနိုင်အောင်ငါပြန်စနစ်ဖွဲ့စည်းမှုကိုသွားပါ။ ညအချိန်တွင်ဤ registry key ကိုမည်သို့ဖယ်ရှားရမည်ကိုကျွန်ုပ်တို့ပြတော့မည်။ ကျွန်ုပ်၏ကွန်ပျူတာကိုကျွန်ုပ်စတင်သောအခါသင်ဤပရိုဂရမ်ကိုရှာဖွေပြီး၎င်းကိုဖွင့်စေချင်သည်၊ ကျွန်ုပ်တို့လုပ်မည့်အရာကဤဖိုင်များကိုဖယ်ရှားပြီးဖြစ်သည်။ သို့သော်ယခုကျွန်ုပ်တို့အမှန်တကယ်ရောက်ရှိနေသောနေရာကိုသွားပြီး၊ ဤဖိုင်များကိုဖျက်ပစ်ပါသို့မဟုတ်ဖျက်ပစ်လိမ့်မည်။ ဤဖိုင်များ၏သဲလွန်စ။
ငါ registry editor ကိုဖွင့်လိုက်ပြီးလက်ရှိသုံးစွဲသူဆော့ဗ်ဝဲ microsoftwindows လက်ရှိဗားရှင်းကဒီမိုက်ကရိုဆော့ရဲ့လက်ရှိ reversionwindows လက်ရှိဗားရှင်းကိုဒီနေရာမှာကြည့်ရတော့မယ်။ အဲဒီမှာကျွန်တော်တို့သွားမယ်၊ ဒါတွေအားလုံးဟာထူးဆန်းစွာဖော်ပြထားတဲ့သူတွေအတွက်စိုးရိမ်နေတာပါ။ , ဒါကြောင့်ကိုယ့်ရှေ့ဆက်သွား။ ကလစ်နှိပ်လိုက်ပါ။ ဒါကသင့်အတွက်နောက်ထပ်ဖိုင်လမ်းကြောင်းတစ်ခုဖြစ်တယ်။ ကျွန်ုပ်ရဲ့ starter ဖယ်ရှားရေးဝက်ဘ်ဆိုက်တွင်ရှိသည်။ သင်၏ကွန်ပျူတာမှ HDD လုံခြုံရေးဖောက်သည်အတုကိုလုံးဝဖယ်ရှားလိုက်ပြီ။ နောက်တစ်ခါသင်တက်မလာရင်ဒီနေရာကိုရောက်မှာမဟုတ်ဘူး။ ဒါကြောင့်ငါ OK ကိုနှိပ်ပြီး OK ကိုနှိပ်လိုက်ပါ။ နောက်ဆုံးမှာ HD ခြိမ်းခြောက်မှုလုံးဝပျောက်သွားပြီ။ သင့်ကိုကျွန်တော်ကူညီလိုက်ပြီ။ ငါကမင်းကိုမြန်မြန်ကူညီချင်တယ်၊ မင်းဆက်လုပ်မှာလား ပြင်ပဗိုင်းရပ်စ်ဖယ်ရှားရေးကွန်ရက်စာမျက်နှာကိုသွားပြီးစတင်လေ့လာပါ။ ငါတို့အတွက်ဒီလိုမျိုးခလုတ်ကိုနှိပ်ရုံဖြင့်ယုံကြည်မှုအနည်းငယ်တည်ဆောက်ရန်ကူညီခြင်းဖြစ်သည်။ အကြောင်းအရာတွေကိုလူအများယုံကြည်လေလေ၊ လူတွေကပိုပြီးယုံကြည်လာလေ၊ ဒီဟာကကျွန်တော်တို့ထုတ်ဝေတဲ့ဆောင်းပါးရဲ့ ၃၀၊ ၄၀ ဆောင်းပါးဖြစ်တယ်။
ကျွန်ုပ်တို့မှာယခုအချိန်အထိကျွန်ုပ်တို့၏သုံးစွဲနည်းလမ်းညွှန်များကိုကြည့်ရှုသူသန်းတစ်ရာနီးပါးရှိပြီးဗိုင်းရပ်စ်ဖယ်ရှားရေးနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏လမ်းညွှန်များအားလုံးကလူတွေကိုခြိမ်းခြောက်မှုကိုဘယ်လိုဖယ်ရှားရမယ်ဆိုတာအတိအကျပြသခဲ့သည်။ နောက်တစ်ခုကသင်ကွန်ပျူတာမှာ virus scan အပြည့်အစုံဖွင့်ထားကြောင်းသေချာစေရန်ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်သည် Spiro Doctor နှင့် Antivirus ပါ ၀ င်ရန်အကြံပြုပါသည်။ ၎င်းကိုသင်ဖယ်ရှားရေးနှင့်ပြန်လည်ထူထောင်ရေးဝက်ဘ်ဆိုက်မှအမှန်တကယ် download လုပ်၍ ဗိုင်းရပ်စ်စစ်ဆေးမှုအပြည့်ပြုလုပ်နိုင်သည်။
Smarter Doctor With Business တွင်အခမဲ့ရက် ၃၀ စမ်းသပ်မှုလည်းရှိပြီး၊ သင်ကတစ်ခုခုကိုရှာမတွေ့နိုင်ခင်အထိဒီစမ်းသပ်မှုကသင်၏ကွန်ပျူတာကိုရက်ပေါင်း ၃၀ အထိကာကွယ်ပေးလိမ့်မည်။ ကျွန်ုပ်သည် Spyro Doctor ကိုဗိုင်းရပ်စ်နှိမ်နင်းရေးစနစ်အများစုတွင်စနစ်များတွင် အသုံးပြု၍ ခြိမ်းခြောက်မှုများဖြစ်စေလိမ့်မည်။ ပထမ ဦး ဆုံးရောဂါကူးမခံပါနဲ့၊ ဒါကတကယ်ကောင်းတဲ့ဖောက်သည်တစ်ယောက်၊ ကျွန်တော်အကြိုက်ဆုံး client တစ်ယောက်ပါ။ ဒါ့အပြင်သင်ဟာဒီခြိမ်းခြောက်မှုကိုဖယ်ရှားဖို့ကျွမ်းကျင်သူတစ် ဦး ကိုရှာဖွေနေတယ်ဆိုရင်ငါအွန်လိုင်းကွန်ပျူတာပြုပြင်ရေးအဖွဲ့အစည်းကိုထပ်မံအကြံပြုလိုပါတယ် အွန်လိုင်းကွန်ပျူတာပြုပြင်ရေးအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုကသူတို့အလုပ်ကောင်းကောင်းလုပ်နိုင်တယ်၊ သူတို့ဘာလုပ်တယ်၊ spyro ထဲကဗိုင်းရပ်စ်အားလုံးကိုသင့်ကွန်ပျူတာဗိုင်းရပ်စ်ဖယ်ရှားရေးလမ်းညွှန်ထဲကနေဖယ်ပေးလိမ့်မယ်၊ မှတ်ချက်ထဲမှာရေးထားတာကအောက်မှာဖော်ပြထားတာမှန်သမျှ၊ သင်ဘာကြိုးစားခဲ့တယ်၊
IDT PC audio ဆိုတာဘာလဲ။ ငါဘာလိုအပ်ပါသလဲ။
ဘာဖြစ်သလဲIDT အသံ? ဒီပရိုဂရမ်ထဲမှာဖွင့်ပေးတဲ့ယာဉ်မောင်းပါရှိတယ်IDTအဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက် (HD)အသံsupport လုပ်ထားတဲ့ operating system ကို run နေတဲ့ support မှတ်စုစာအုပ်မော်ဒယ်များအတွက်။
erradele သည်ဤဆောင်းပါး၏ ၁၅ ချက်ပါ ၀ င်သည်။ ကျွန်ုပ်သည်သင်၏ကွန်ပျူတာ၏အသံကိုမပြောရန်အာရုံစိုက်မည်ဖြစ်ပြီး၊ များသောအားဖြင့်အသံကဒ်များသို့မဟုတ်အသံကဒ်များပါ ၀ င်သည်။ onboard audio ပါသည့်ပလပ်စတစ်လှံများဖြစ်သည်။ အရည်အသွေးကောင်းတဲ့အသံ၊ onboard အသံတောင်မှ၊ ဒီနေ့ခေတ် motherboard အသစ်တွေက ၂၄-bit studio အရည်အသွေးကိုအသံပေးနိုင်ပါတယ်။ အထူးသဖြင့်သင့်မှာစတီရီယိုကောင်းတစ်ခုသို့မဟုတ်တကယ်ကောင်းမွန်သောစပီကာစနစ်ရှိရင်အခုဆိုရင်သင်လုပ်နိုင်သည်။ Channel Controller၊ အကယ်၍ အသံထိန်းချုပ်သူအမြောက်အများနဲ့ကွန်ပျူတာတွေအများကြီးမပါလျှင်၊ အထူးသဖြင့်ကောင်းမွန်သော high-end စားပွဲတင်ကွန်ပျူတာများမှာအသံကောင်းတဲ့ဂစ်တာများရှိပြီး၊ သင်အာရုံစိုက်ချင်တဲ့လက်ပ်တော့များလည်းမတတ်နိုင်ပါ။ အသံ Controller ဘာလုပ်နိုင်လဲ
ဤသည်သည်အခြေခံအားဖြင့် Windows Vista မဟုတ်ပါ၊ သို့သော်ဤအဆင့်သည် ၁ မှ ၇ နှင့် Windows 8 မှ Ibelie မှဖြစ်သည်။ သင်ပြန်ဖွင့်သည့်ကိရိယာများသို့သွားသောအခါစပီကာများသို့မဟုတ်နားကြပ်ကိုရွေးချယ်ပါ၊ ဆိုလိုသည်မှာဤစနစ်သည်ပုံမှန်ကိရိယာဖြစ်သည်၊ Properties ကိုရွေး။ Advanced tab သို့သွားပါ။ ဤနေရာတွင် DVD အရည်အသွေးသည် 16-bit 48,000 hertz အရည်အသွေးနိမ့်သည်ကိုသတိပြုပါ။ ကျွန်ုပ်၏1515 Inspiron ကို CD အရည်အသွေးဖြင့်ပုံမှန်သတ်မှတ်ထားသည်။ သင်ဒီမှာတွေ့နိုင်သည်ဒီအသံထိန်းချုပ်မှုသည် ၂၄ bit 192 192,000 hertz studio အရည်အသွေးသို့သွားနိုင်သည်ဟုသင်ယုံကြည်သည်။ ဒီ option လည်းရှိတဲ့ Midtown Deluxe, Real Tank High Definition Audio ဒီကွန်ပျူတာထဲမှာ High Definition Audio လည်းရှိတယ်၊ ဒါကြောင့် 24 bit 192,000 Hertz စတူဒီယိုအရည်အသွေးကိုရွေးချယ်ပါ။
အခုတော့ကောင်းပြီ၊ သင်ကွဲပြားမှုကိုသတိမပြုမိပါ၊ လက်တော့ပ်အတွင်းပိုင်းစပီကာများသာဖြစ်သည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်အတွင်းပိုင်းစပီကာများသည်ပုံမှန်အရည်အသွေးမဟုတ်သောကြောင့်နားကြပ်အချို့ကိုတပ်ဆင်ပါကသင်တစ်စုံတစ်ရာကိုပြသရန်ခွင့်ပြုပါကယခုအချိန်တွင်ခြားနားချက်ကိုသတိပြုမိလိမ့်မည်။ အခြားသေးငယ်သောအချက်အလက်များနှင့်သင်၏မိုက်ကရိုဖုန်းမှတ်တမ်းတင်ခြင်းအတွက်၎င်းကိုပိုင်ဆိုင်မှုများကိုဤနေရာတွင်ရွေးချယ်နိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်သည်ကျွန်ုပ်၏ကင်မရာမှမိုက်ကရိုဖုန်းကိုထုတ်ယူပါလိမ့်မည်။ သို့မှသာသင်သည်ဆူညံသံအနည်းငယ်ကိုမှန်မှန်ကန်ကန်ကြားနိုင်ရန်အတွင်းပိုင်းမိုက်ခရိုဖုန်းကိုပြောင်းမည်။ ဟုတ်ပါတယ်၊ အဲဒီအတွင်းပိုင်းမိုက်ခရိုဖုန်းကိုသုံးတဲ့အခါမှာကင်မရာကဆူညံသံအနည်းငယ်ကိုလုပ်တယ်၊ ဒါပေမဲ့ဒါကငါ့ကင်မရာမှာ Z ကို ၆ ခုသုံးတဲ့မိုက်ကရိုဖုန်းပါ။ မိုက်ကရိုဖုန်းမော်ဒယ်လ်ကငါ့ကင်မရာပါ။ ဒီဟာစျေးပေါတဲ့ Sony ECM D s 70 P ပါ။ အတုပုံတူပွားခြင်းအစစ်အမှန်ဖြစ်သော်လည်းမိုက်ကရိုဖုန်းအတုပင်ယင်းသည်တကယ့်အရာကဲ့သို့ကောင်းမွန်စေသည်။ ဒီမိုက်ကရိုဖုန်းတွေက eBay နဲ့သုံးဒေါ်လာလောက်ရောင်းတယ်။ ငါတို့ရဲ့အစစ်အမှန်စတီရီယိုမိုက်ကရိုဖုန်းမိုsnow်းပွင့်ကကျွန်တော့်ကင်မရာစိတ် ၀ င်စားမှုက mono နဲ့သာသဟဇာတဖြစ်တယ်၊ တကယ်တော့ငါကမိုက်ကရိုဖုန်းနှစ်လုံးပါ ၀ င်တာပါပဲ၊ ကွန်ပျူတာကိုသုံးပါ၊ သင်သုံးနိုင်သည့်စတီရီယိုစနစ်ဖြင့်သုံးပါ၊ သို့သော်သင်ဤထဲသို့ ဝင်၍ ၎င်းကိုမပြောင်းမချင်း၎င်းသည်အားသာချက်မရှိပါ။ i ချိန်ညှိချက်များအဆင်ပြေပါသည်။ မိုက်ကရိုဖုန်းသည် goahead နှင့်ပါးလွှာသောအင်္ဂါရပ်များဖြင့်ချိတ်ဆက်ထားသည်။ ယခုတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်a/ c ကိုတိုးချဲ့ပြီးဖြစ်သည်။ cranked up နှင့်ပုံမှန်အားဖြင့်၎င်းတွင် channel ၂ ခုရှိသည်။ အချို့သော Controller များသည် channel ရည်ညွှန်းချက်ကိုဒီမှာသတ်မှတ်ထားသည်။ ဒီမှာ 444 သို့ပုံမှန်အားဖြင့်၎င်းသည် ၄၈,၀၀၀ hertz သို့ ပြောင်းလဲ၍ ပိုမိုကောင်းမွန်သောရလဒ်များကိုရရှိနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်သည် channel ၂ ခုရှိပြီဖြစ်သည်။ 16-bit 44,100 hertz နှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင် 8000 hertz -bit အတွက်, ဒါကြောင့်သင် sserung ကြိယာတစ်ခုရရှိပါလိမ့်မယ်။ ဒါကြောင့် ok ကိုရွေးချယ်ပြီးဒီအသံကောင်းတဲ့အသံကိုတပ်ထားပါ။ ဒါကြောင့်မင်းရဲ့ကလေးငယ်ကိုဖြုတ်ပြီးကင်မရာထဲပြန်ထည့်လိုက်တယ်။ အသံကနေစပျစ်ရည်ကိုငါတို့ပွင်ကြလိမ့်မည် ဤ Sony မိုက်ခရိုဖုန်းသည်မည်သို့ပင်ဖြစ်စေကျွန်ုပ်သည်ဤအရာသည်သင့်အတွက်အထောက်အကူဖြစ်စေမည့်သတင်းအချက်အလက်ဖြစ်သည်ဟုကျွန်ုပ်မျှော်လင့်ပါသည်။ အထူးသဖြင့်သင့်ကွန်ပျူတာတွင်စတီရီယိုစနစ်တစ်ခုသို့မဟုတ်အသံချဲ့စက်စနစ်ရှိပါကကျွန်ုပ်ပြုလုပ်နေသည်၊ ကျွန်ုပ်သည်ကျောင်းစာနှင့်လက်ရှိသင်တန်းများပြုလုပ်နေစဉ်ကတည်းကဤအခန်းသည်အလွန်ရှုပ်ထွေးသည်။ ငါကွန်ပျူတာများကိုပြုပြင်နေပြီ၊ ဤတွင်ဤနေရာကိုရှင်းလင်းရန်အချိန်အနည်းငယ်ရှိ၏။ သို့သော်သင်သည်လက်ခံသူရှိကြောင်းသတိပြုမိသည့်အခါ၎င်းတွင်စပီကာတစ်ခုရှိပြီးစပီကာတစ်ခုရှိသည်။ သင်တိုးမြှင့်ခြင်းတွင်ဤချိန်ညှိချက်များကိုဖွင့်လိုက်သောအခါထိုစပီကာများကကောင်းမွန်သောအသံဖြစ်သည်။ အမြင့်ဆုံးပြောရမယ်ဆိုရင်၊ ကျွန်တော်ဟာမည်သည့်ဂီတသရုပ်ပြပွဲကိုမှတကယ်ကိုသွားလို့မရဘူး၊ ဘာလို့လဲဆိုတော့မင်းကဆောင်းပါးကိုတကယ်မပြောနိုင်တဲ့အတွက်၊ မူပိုင်ခွင့်ပြissuesနာတွေနဲ့ဆင်တူတာမျိုးမရှိဘူး၊ ကျေးဇူးပြုပြီးမေးကြည့်ပါ။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
၎င်းသည် sttray64.exe အမှားများကိုမဖြေရှင်းနိုင်ပါက Control Panel ကို အသုံးပြု၍ ပရိုဂရမ်ကို uninstall လုပ်ပြီး Windows registry ၏ scan ကိုအကြံပြုသည်။ ယခုပြproblemsနာများကိုဖြေရှင်းပါ။ sttray64.exe ကျွန်တော့် PC နှေးကွေး! ပရိုဂရမ်များနှင့်ဖိုင်များသည် Windows operating system ၏စွမ်းဆောင်ရည်အပေါ်များစွာသက်ရောက်မှုရှိသည်။ အချို့ဖြစ်ရပ်များတွင်၊ sttray64.exe လည်းပါဝင်သည်။
sttray64.exeon ဖိုင်သည် Trojan ဖြစ်ပါသလား။
ဖိုင်အမည်တစ်ခုပေါ်တွင် .exe extension သည် executable file တစ်ခုကိုညွှန်ပြသည်။ executable files များသည်အချို့သောအခြေအနေများတွင်သင်၏ကွန်ပျူတာကိုထိခိုက်စေနိုင်သည်။ ထို့ကြောင့်၊ သင်၏ကွန်ပျူတာ sttray64.exeon သည်သင်ဖယ်ရှားသင့်သော Trojan တစ်ခုလား၊ ၎င်းသည် Windowsoperating system နှင့်ယုံကြည်စိတ်ချရသော application ၏ဖိုင်တစ်ခုဟုတ်မဟုတ်ဆုံးဖြတ်ရန်အောက်တွင်ဖတ်ပါ။
System Tray application သည်မည်သည့် IDT နှင့်သက်ဆိုင်သနည်း။
IDT PC Audio သို့မဟုတ် IDT PC Audio TPE သို့မဟုတ် sttray64.ex သို့မဟုတ် Sigmatel အသံစနစ်စနစ် tray application ဟုလူသိများသောလုပ်ငန်းစဉ်သည် software IDT Audio သို့မဟုတ် IDT PC Audio သို့မဟုတ် Tempo Semiconductor သို့မဟုတ် Tempo C သို့မဟုတ် Audio သို့မဟုတ် www.idt.com သို့မဟုတ် Tempo PC Audi မှဖြစ်သည်။ IDT (www.idt.com) သို့မဟုတ် Tempo Semiconductor သို့မဟုတ် SigmaTel (www.sigmatel.com) ။